Resaky ny mpitsimpona akotry : tolona ao amin’ny tontolon’ny rugby | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : tolona ao amin’ny tontolon’ny rugby
Eny ambony kianja ifampikatrohan’ny ekipa mpifaninana no miseho ny fifandonana ara-batana. Fa na ireny sôkasôka mahery vaika ireny aza dia voafehin’ny fitsipika mitandro fahadiovan’ny lalao sy fangaraharan’ny fikatrohana, miaro ny tsy ahatongavana any amin’ny fifandratrana. Tsy ny eny an-tsehatra indray moa no nanondrana fa ny any anivon’ny fitantanana ny rafitra izay natao hiantoka ny fandaminana eo amin’ ny tontolon’ity taranja fanatanjaham-batana sady fikoloana toe-tsaina, izay voalazan’ny Anglisy fa raha ny baolina kitra dia azo heverina ho kilalao mihaja ifandonan’ny jiolahim-boto dia ny baolina lavalava kosa dia lalaom-boto irotsahan’olo-mihaja izany hoe manana toe-tsaina mendrika noho ny fahaizana manaja ny sasany izay mitory ho azy fihajan’ny tena.
Eo amin’ny rafitry ny fitantanana samy manana ny hasiny ny federasiona sy ny ligy fa noho izy izany hoe rafitra izany dia misy ny ambaratonga ary voatsinjara arak’izay ny adidy sy ny fahefana entina anatanterahana ny andraikitra. Lasa mifaninana ireto sampana roa eo amin’ny fitantanana ka tsy mahagaga noho izany raha misy disadisa miseho ahitana taratra ny ady na fifandrafesana. Tavela teo ilay toe-tsain’olo-mihaja. Fifanendrikendrika am-pahibemaso no niseho. Samy nitaraina ny fitsabahan’ny sotrobe lavatangon’ny ankilany ao ambilanin’ny tena. Sady samy nampiaka-peo no nanangan-tsandry nifampidera hery, narahana fanehoana fandrahonana. Ny fahefana samy manana araky ny rafitra ijoroana. Tsy arak’izay anefa ny enti-manana. Na ny kianja ilalaovan’ny mpiangaly ny taranja aza dia mitory fahantrana. Ny kianja eo Antanimena no mbola mibahana ao amin’ny sain’ny maro. Derain’ny betsaka manana ny hasiny manokana raha mbola rugby no anton-dresaka. Io kianja io moa izay efa ravarava teo aloha ka saika nitovy
amin’ny fanaovam-baolina an-tanimbary ny fisehon’ny lalao nifanaovana, anaty fotaka raha fahavaratra, karankaina amin’ ny andro maina, dia narenin’ny olona miandraikitra azy tsikelikely ka lasa kianja mendrika filalaovana am-pihajana sady manaja ny mpijery. Araky ny siosion-dresaka dia ireo olona nahavita fanarenana ny kianja no nampiseho fahaizana sy fahendrena nahafahana nandravona ny kitaontaona sy kitoatoa teo amin’ny rafitra miadidy ny baolina lavalava. Na tsy te sehoseho aza ireny olona ireny fa manao ny asany mangina dia tsy azo hodian-tsy hita ny bainga vavolombelon’ny asa, izay mifanipaka amin’ny fideraderan-tena an-kabary nefa ao ambadika boribory ny vokatra. Fanemorana tsy misy farany amin’ ny fanaovana ampitso ampitso ny fotoana ifampitsarana miainga avy amin’ny asa vita.